အမှားအမှန်အချိန်တန်ရင်ပေါ်ပါမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အမှားအမှန်အချိန်တန်ရင်ပေါ်ပါမည်
Posted by Yel Kaung on Jun 10, 2012 in Copy/Paste | 23 comments
လိုပြီ. . . .ခင်ဗျားရေးတဲ့အထဲမှာတောင်ပါကျုပ်သတင်းကိုထောက်ခံတာပါတာဘြဲ့ပန်ကြည့်ပါ
voice of myanmar တွင်ရှေတန်းသူတစ်ဦးရောက်ပြောကြားချက်တဲ့
အခြားတာဝန်ကျေကြသူများမှာ သေနတ်ကိုင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ နောက်သို့ တုတ် ဓါးများဆွဲကာ လိုက်ပါရင်း ကျူးကျော်သူတို့ကို လိုက်ပါတိုက်ခိုက်နေသော ဒေသခံများဖြစ်၏ ၊ သူတို့သည် နယ်မြေကျွမ်းကျင်လှ၏ ၊ သူတို့ကြောင့်ပင် လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်သူများက လူဆိုးလူကောင်း အလွယ်တကူခွဲနိုင်၏ နိုင်ငံသား အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များနှင့် ကျူးကျော်သူများ ကိုကောင်းစွာ ခွဲခြားနိုင်ခဲ့လေရာ ထိုသူများကို အထူးကျေးဇူးတင်ရ၏ ၊ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာရောက် ဗိုလ်မှူးတစ်ဦးက ” စစ်တိုက်ထွက်ရတဲ့အထဲမှာ ဒီတစ်ခါလောက်အားပါတာမရှိဘူးဗျာ ခုကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိနေတာ ပေါ်တာတွေ မဟုတ်ဘူးဗျာ တကယ်ကို သူတို့စိတ်နဲ့လိုက်လာပြီး ခေါ်တော တွေကိုချတာဗျ သူတို့ကတောင်ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုတက်ကြွနေလို့ စိတ်ထိန်းဘို့ ပြောနေရတယ်ဗျာ ဒီမျိုးချစ် ဒေသခံတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မကောင်းမကန်း ရိက္ခာလေးတွေပဲကျွေးနိုင်တာ အားနာလိုက်တာဗျာ…. ” ဟု ပြောကြားပါသည် ။
မောင်တောမြို့နယ် မြိုကသူကြီးကျေးရွာ အုပ်စုရှိ ဆော်မော်နာ (သုံးမိုင် နစက ဂိတ်အနီး) ကျေးရွာ ကို ရဃိုင်အစွန်းရောက်သမားများက မီးလောင်တိုက်သဖြင့် ယ္ခုအချိန်တွင် မီးလောင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာ တွေအားလုံးအတွက် ဝမ်းသာ စရာ သတင်းလေး တစ်ပုဒ် ပါ…..တဲ့
မောင်းတောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ အဆက် အသွယ် ရပီ ကျန်တဲ့သူတွေလဲ ကျွန်တော့လို ဝမ်းသာစေချင်တာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ…….
…. ၁၅၀ လောက် ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်အမျိုးသမီးတွေ တောင် ဓါးကိုင်ပီတော့ ကုလားကိုလည်လှီး သတ်ချင်နေ တယ်လို့ ကြားပါတယ်
ဒီပုံတွေကြည့်ပြီးအကြမ်းဖက်နေတယ်လို့ထင်ရလို့လား၊အကြမ်းဖက်ခံနေရတာလား၊ လူရယ်စရာဖြစ်နေပါမယ် . .
BBC သတင်းဌာနက မောင်တောမှာဖြစ်နေတဲ့ အရေးကိစ္စကို Burma police clash with Muslim protesters in Maung Daw ဆိုပြီးတော့ ရေးလာပါတယ်
voice of myanmar ထဲမှာဘဲ
လွန်ခဲ့သောရက်ပိုင်းအထိ ရခိုင်ပြည်နယ် မှဖြစ်စဉ်များကိုဖေါ်ပြရေးသားရာတွင် သတင်းမီဒီယာတို့သည် ပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲနေကြဆဲဖြစ်ပါသည် ၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲဟူသော အသုံးအနှုံးများကို တွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါသည် ၊ ရခိုင်လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာအေးမောင်သည် လည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာအရပ်တွင်ကိုယ်တိုင်ရှိပါလျှက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်မှ မလွန်မှန်းသိပါလျှက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်မှ လိုက်ပြောသည်ဟု အထင်ရောက်မည်စိုးသောကြောင့် မရေမရာစကားများကိုသာ ပြောနေခဲ့သည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည် ၊
ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ ရောက်ရှိလာရာ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူးနှင့် ၀န်ကြီး တစ်ဦး၊ တခြားပြည်နယ်အဆင့် ၀န်ကြီးများလည်း ပါဝင်လာကြောင်း ဒေသခံ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
နောက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဒီလို့ရေးပါတယ်“ တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ကိုကိုနိုင်နဲ့ ၀န်ကြီးတွေ ပါလာပါတယ်။ အခု မီးတိုက်ခံရတဲ့ မောရ၀တီ၊ ရွှေရင်အေးတို့ကို သွားကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ မောရ၀တီမှာ အိမ်ခြေ ၁၀၆ ဆောင်မှာ တစ်ဆောင်ဘဲ ကျန်တယ်။ အကုန်လုံး မီးရှို့ခံရတယ်။ လူတွေ ခိုကိုးရာမဲ့ ဖြစ်နေကြပါတယ်”ဟု သူက ပြောသည်။
တခြားမီးတိုက်ခံရသော ကျေးရွာများမှာ ကိုင်းကြီး၊ ရွှေရင်အေး၊ သရေကုန်ဘောင် အပါအ၀င် အဆိုပါ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် (၈) ရွာခန့်ရှိကြောင်း သူက အတည်ပြု ပြောကြားသည်၊
ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ တိုင်းမှူးများနှင့်ဒုဝန်ကြီးများရောက်သွားမှ တရားခံလည်း လည်ပင်းအစ်ပြီးသေရပြီ။
မုဒိမ်းကောင် သေတာကို တော်တော် နှမျောတသဖြစ်နေပုံရတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ မအေ၊ နှမတွေအတွက် MNL က ဘောလုံးသမား နီဂရိုးတွေ ကျန်ပါသေးတယ်။ သမီးရှိရင်လည်း အဆစ်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့။
ကိုယ်မေကို Lိုး တွေ
ကုလားလေးကလက်မထောင်ပြနေတာ အသတ်ခံရမှာမို့ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူနေတာထင်ပါ့။
ဘေးကလူတွေကလည်း ဖိနှိပ်ခံရလို့ လွန်စွာဝမ်းနည်းအားငယ်နေပုံပါပဲ ကိုရဲခေါင်။
မြန်မာတွေနှိပ်စက်ရင် မြန်မာပြည်ဘာလို့လာနေကြတာလဲ။ မနေကြနဲ့တော့ ပြန်တော့။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ်ပြန်ကြ မြန်မာတွေကအဲလိုပဲရက်စက်တယ် ယုတ်မာတယ် နောက်ဘယ်တော့မှ
မလာနဲ့။ ရှင်တို့တိုင်းပြည်ကအစိုးရကို အကူအညီတောင်းပြီးပြန်ခေါ်ခိုင်း ဒါဘဲ။
ငါတို့တိုင်းပြည်လာနေရင် ငါတို့လုပ်ချင်သလိုလုပ်မယ် ဘာဖြစ်ချင်လဲ။ အခုရွာထဲမှာလဲ မနေနဲ့။
ရခိုင်အမျိုးသမီးတွေတင်မဟုတ်ဘူး ငါတို့ဗမာအမျိုးသမီးတွေလဲ လူသတ်ချင်စိတ်ပေါက်နေတယ်။
မြန်မာ့မြေ၊ မြန်မာ့ရေကို မှီခိုအသက်ရှင်ပြီး နိုင်ငံကို ထိပါး၊ တိုင်းရင်းသားတို့ကို သတ်ဖြတ်၊ ဥပဒေကို မထီမဲ့မြင်ပြုသူအားလုံးအား အမျိုးဖြုတ် သုတ်သင်ပေးပါရန် လက်နက်ကိုင်အင်အားများကို ၀ိုင်းဝန်း တောင်းဆိုကြပါ၊ ၀ိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးကြပါ။ ဒီခွေးရူးတွေကိုသတ်လို့ နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးလာရင် တတိုင်းပြည်လုံး(ခွေးကို ဖအေတော်ချင်သူများမှအပ) ငြိမ်နေမှာမဟုတ်ပါ။
အော်သနားစရာပဲ အလံဖြူတောင် ထောင်ပြီးအကူအညီတောင်းနေတာ …..ကျွတ်..ကျွတ်။
အခုအချိန်ကစပြီး မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး ကိုယ်လုံပညာသင်ထားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ ဒါမှ အနီးကပ်ရန်သူတွေကိုလည်း ခုခံနိုင်မှာ။ မိန်းကလေးတွေလည်း စော်ကားချင်တိုင်းလာစော်ကားလို့မရအောင်။
ဘင်ဂလီတွေ ကိုယ်လုပ်ရင်ကိုယ်ခံရမှာပဲ။ ခုမှကလေးပဲရှိသေးတယ်။ လက်မထောင်ပြီး အမြင်ကပ်စရာကောင်း
လိုက်တာ။ေ-ာဘေးတွေ။ သနားစရာတစက်မှမကောင်းဘူး။
shwe kyi ဒီမှာကျောက်နီမော်ကလုပ်ကြံပုံတွေတင်ပြီရခိုင်ပြည်အရေးအခင်းစတာနင်ဘဲ၊ အမှားအမှန်မဝေခွဲဘဲလုပ်ချင်ရာလုပ်မယ်ဆိုရင်မင်း ထိုင်းရောက်ဘူလား ၊အဲဒီလိုလူများလို့လုပ်ချင်ရာလုပ်မယ်ဆိုရင် ထိုင်း ရောက်နေတဲ့ ရခိုင်မလေးတွေ၊မြန်မာတွေ အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ၊ မလေးရှားကလူတွေကလဲ ရောက်နေတဲ့ရခိုင်မလေးတွေ၊မြန်မာတွေကို
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျကိုရောရောက်ဖူးလာ၊ အဲဒီမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ ရခိုင်ရွာတွေ အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ ၊ အခုတရားခံကိုရှင်းပြစ်လိုက်တာမရိုးသားဘူး၊အမှန်တရားမြတ်နိုးတယ်ဆိုရင် တရားခံကိုအမှုမှန်ပေါ်အောင်စစ်ရမယ်၊နောက်ဆက်တွဲကွင်းဆက်တွေအဆက်သွယ်တွေပေါ်အောင်စစ်ရမယ်။
“ငါတို့တိုင်းပြည်လာနေရင် ငါတို့လုပ်ချင်သလိုလုပ်မယ် ဘာဖြစ်ချင်လဲ။ အခုရွာထဲမှာလဲ မနေနဲ့။´´
လေအိတ်ကားကြီးကိုမြို့ထဲမှာခွေးတွေ သမင်လိုက်သလိုဝိုင်းလိုက် ကားပေါ်ကလူတွေအကုန်
အခုရခိုင်ကိစ္စမှာ ဘယ်ဘာသာကိုပဲ ကိုးကွယ်ကွယ်၊ အလယ်က သတင်းသမားသာ တင်ပြတာမမှန်ခဲ့ရင်၊ ဘက်လိုက်ဇောင်းပေး biased လုပ်ခဲ့ရင် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးဆူပူတာ ပိုကြွလာမယ်၊ နှစ်ဖက်လုံး မလိုအပ်ဘဲအသက်စည်းစိမ်တွေ ပိုဆုံးရှုံးမယ်၊ သေးတဲ့အမှု ပိုကြီးလာမယ် ဆိုတာဆိုတာ ဆရာ MG ဝိုင်းတော်သားများအားလုံး၊ စာတစ် ကယ်ဖတ်သူအားလုံးနားလည်မှာပါ။
ပထမ- ရခိုင်အမျိုးသမီး တစ်ဦး မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီး ပစ္စည်းယူ၊ အသတ်ခံရတယ်၊ ဘယ်သူကပဲလုပ်လုပ် ရဲပိုင်တဲ့ criminal case ရာဇ၀တ်မှုသာ ဖြစ်တယ်၊ ဒီရက်ပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ ဆရာဝန်မတစ်ဦး ကို သူ့မိတ်ဆွေ က ဓါတ်ဆီလောင်း မီးရှို့သတ်တာ၊ ၁၆ လမ်းက ၁၀တန်းဖြေထားတဲ့ ကောင်မလေး တစ် ယောက် လူသတ်၊ ပစ္စည်းယူ၊ မီးရှို့သတ်ခံရတာ၊ ၁၃ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို လိင်တူ ယောင်္ကျား ချင်းမုဒိမ်း ကျင့်၊ ပါးစပ်ပိတ်လူသတ်သွားတာ စတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ဘာမှ မကွာ လှတဲ့ ဖြစ်စဉ်တူတစ်ခုပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းက ဂျပန်မတစ်ယောက်ကို မြန်မာနှစ်ယောက် မုဒိမ်းကျင့်ပြီး သတ်ပစ် တယ်၊ ရောက်သေ ဒဏ်ပေးဆော်ထည့်တယ်ဥပဒအရနောင်ကျဉ်နေအောင် မြန်မာပြည်မှာဒါကိုလက် မခံဆိုပြီး၊ ထိထိရောက် ။ ဒီဟာတွေမှာလည်း ဘယ်ဘာသာဝင်ကလုပ်တယ်လို့ ဘယ်မီဒီယာက မှမရေး ဘူး၊ ရေးစရာ လည်း မလိုဘူး၊ ရဲကအရေးယူ၊ ထိရောက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ချ၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပြီးပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံ ထဲ မှာဖြစ် တယ်၊ မြန်မာ တည်ဆဲရာဇ၀တ်ဥပဒေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ကိုင် ထည့်လိုက် ရင်ပြီးနေပြီ။ ဘာမှ ဆက်ဖြစ် စရာမရှိဘူးလေ၊ နင်ကလာ ဖွတယ်၊
အင်မတန်ထိလွယ် ရှလွယ်တာကို လွယ်လွယ်ရေး ချတယ်၊ မွတ်ဆလင်ကုလား usage သုံးပြီး comment တွေရေးခွင့်ပေးတယ်၊ ဘယ်ဘာသာ ၀င်လို့ ရေးကတည်းက သွားပြီ၊ တင်ပြတာမမှန်တော့ဘူး၊ နောက်ဆက်တွဲ ဘာဖြစ်လာမလဲ သိသင့်တယ်၊ သိသိကြီးနဲ့လွယ်လွယ် ရေးချတယ်၊ လွယ်လွယ်ဖတ်တဲ့ လူအုပ်စုတစ်စုကသွေးကြွတယ်၊ ရပ်ရန် မဟုတ်တဲ့ ဆက်ရန်တွေဖြစ်လာတယ်၊ ဆက်ပြီးတော့ သတ် ကြစေချင်တော့…
ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုရှိခြင်းပါပဲ၊ အခုလို Online မှာ Open Source သတင်းတွေ အများကြီးရနိုင်ချိန်မှာတောင် သတင်းအမှားတွေ၊ သတင်းအလိမ်တွေ၊ ဒီလိုလေးတော့ဆော်လိုက်ဦးမှ အောက်တန်းကျစိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ လုံးဝတည်ငြိမ်အေး ချမ်းဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ဒေ သတစ်ခုကို ၁၀ ရက်အတွင်း လုံးဝဆိုးရွားသွားစေလောက်အောင် လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း တစ်ခုပေါ် ထွက်လာအောင်နောက်ကွယ်ကနေ ဘေးတီးလှုံဆော်ဖန်တီးချင်တဲ့မူဝါဒရှိနေ တာ၊ စာမဖတ်ဖြစ်ကြတဲ့လူ အများ စုကို မျိုးချစ်စိတ်အရင်းခံသယောင် စည်းရုံးလှုံဆော် ဆူပူစေတာ၊ ရလဒ်က ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ လူနေမှုပုံရိပ်တွေ ကျဆင်းစေတာ၊ စီးပွားရေးတွေ ပုံမှန်မဖြစ်စေတော့တာ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသွားစေတာ၊ ပေါ်လာတဲ့အမြတ်က EMG ကိုပိုမိုထင်ပေါ် စောင်ရေတက် အရောင်းကောင်းစေချင်တာ၊ MG က ငါတို့ ဖက်ကမျိုးချစ်တွေ Patriotic တွေ လို့ ထင်ရအောင်လုပ်ပြပြီး နိုင်ငံရဲ့ လူတိုင်းရဲ့ လက်ရှိပန်းတိုင် နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်စားနေကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီပန်း တိုင်ကိုေ၀၀ါးလမ်းကြောင်းပြောင်း ပစ်နေတာ၊ ဘာမှစာဖွဲ့စရာတောင်မရှိ (ကုန်ကုန်ပြောရရင် တစ်ရက်တိုက်စရာတောင်မရှိ၊ နေ့ဝက်နဲ့ အပြီးရှင်းပစ်လို့တောင်ရ) တဲ့ လူလက်တစ်ဆုပ်စာကြောင့် တစာစာအော်ခေါ်ပြီး အမြင်နောက်ပြန်ဆွဲနေတာ၊ နိုင်ငံပုံရိပ်ကို အဆုံးထိဆွဲချပစ်တာတွေဟာ . .မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ရှက်တတ်ရင်နင်တို့ရှက်ပြီးသေပစ်ချင်စရာပါပဲ။ .တာဝန်ယူပြီးသတ်သေဖို့ကောင်းပြီ၊ ထက်ထက်လိုမျိုးကိုယ်သတ္တိရှိရင်ကိုယ်ကို ကိုကြိုးဆွဲချပြီးသေလိုက်ပါ . .ငရဲပြည်ကနင်တို့တွေကိုခေါ်နေတယ်
အေး နင်ရေးသလောက်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးငါမရေးတော့ဘူး။ ငါ ပြောမယ် ဘယ်နိုင်ငံမှငါမရောက်ဘူးဘူး။ နင်သိထားဖို့က ဘယ်မြန်မာမှသူများတိုင်းပြည်နေပြီး
အသိသာကြီးကို ဒညင်းသီးကအီးတပြန်ဖြစ်နေလို့ ပြောတာ။ နင်တို့သောင်းကျန်းနေတာကို သူများလွှဲချလို့ပြောနေတာ။ နင်က အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးတယ်ဆိုပြီး အပြောတစ်မျိုးအလုပ်
တစ်မျိုးပါလား။ ကျန်တဲ့သတင်းထောက်တွေက မျက်စိကန်းနေလို့လား။ ဒါမှမဟုတ်ရူးနေလို့
လား။ ငါတို့ရွာထဲကလူတွေ တောင်ကုတ်ကိစ္စကိုလည်းရှုံ့ချခဲ့ ကြတယ်။ မတရားတာမှန်သမျှ
ရှုံ့ချတယ်။ နင်မဖတ်တတ်တာလား ကျော်ဖတ်တာလား ဟင် ပြောစမ်းပါဦး။
ငါတို့ အားရတယ် ထပ်သတ်လို့များပြောခဲ့လို့လား ဟင် ဖြေစမ်းပါဦး။
အားလုံးက ဥပဒေအတိုင်ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာ နင်နားမလည်တာလား နားမလည်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာလားပြော။ အကြမ်းဖက်တာကိုလုံးဝမလိုလားဘူး။
အခု ငါတို့ အမျိုးတွေမဆိုင်တဲ့သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာ နင်တွေ့လား။
နင်က ငပြူးကလာပြဲနေတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်နေတယ်။ နင်ကအမှန်တရားဆိုပြီး
တစ်ဖက်စောင်းနင်းပြောတယ်။ ငါတို့အားလုံးမျက်စိပါတယ်။ အသိဥာဏ်ရှိတယ်နားလည်
ထား နင်ပြောသလိုငါဘယ်တုန်းကမှမွတ်ဆလင်ကုလားဆိုပြီးမသုံးဘူး ဘင်္ဂလီနယ်ချဲ့ပဲသုံး
ခဲ့တယ် ဒါအမှန်ပဲ။ နင်ကရွာထဲအရင်လာရန်စတာ။ ကိုရွာစားကျော် ပုံတွေကိုနင်က
ဝေဖန်တာ တိုက်ခိုက်တာ။ အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးတာမှန်ရင်ပေါ့ အမှန်တရားကိုမြင်အောင်
ကြည့်တတ်အောင်လုပ်ဦး ပို့စ်တင်တာလည်းငါမဟုတ်ဘူး နင် နားလည်လား။
ပို့စ်တင်ပြီး တိုက်တာ ဘယ်သူလဲ။ တောပြီ နင်မဆိုင်တာတွေအများကြီးပြောပြီးငါ့ကိုတရားခံ
စွဲရအောင် နင် အသိဥာဏ်မရှိတာလား လုပ်တဲ့သူကနင်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေလို့လား..။
ငါအခုပြောနေတာ မြန်မာပြည်ဖွား မွတ်ဆလင်တွေမပါဘူးဆိုတာနင်နားလည်လား။
ငပြူးက လာပြဲပြနေတယ်..ဘာမှန်းလဲ တိဘူး..ဟာဗျဲ.ဟာဗျဲ..
မင်းအမေသာမင်းပြန်လိုးလိုက် … မျိုးမစစ်ကောင်ရေ
ရူးကြောင်ကြောင်တွေ၊ သောက်တလွဲတွေ လျှောက်တင်မနေနဲ့။
သတ္တိမရှိတဲ့ အခြေက်လိုကောင်မို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတာပေါ့ဟ။
ကျောက်နီမော်ကိစ္စက ဘယ်သူစခဲ့တာလဲဆိုရင် တရားခံတွေကိုယ်တိုင်ကကို အဲဒီလိုဖြစ်အောင် တမင်တကာစခဲ့တာပဲ..မပေါ်မယ့်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး…မုဒိန်းကျင့်၊ လူသတ်၊ ပစ္စည်းယူ..ဒါတင်မက ရက်ရက်စက်စက် ထပ်ဖျက်စီးတယ်ဆိုတော့…ဒီလောက် မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ အုံကြွလာအောင် တမင်တကာ လုပ်ခဲ့တာ… ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုကိုယ်အနစ်နာခံပြီး ပေးဆပ်တဲ့သူတွေကို အလ္လာက ကောင်းချီးပေးတယ်လေ…
ဆက်ပြောရရင် ဒီလို လောလောလတ်လတ် ပြသနာတက်ထားတဲ့ နေရာကို အဲဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက ဘာလို့လာကြတာလဲ… ဒီလိုဖြစ်မှာကို ကြိုမသိဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်လဲ…
ဘဖောပြောသလိုပဲ အားလုံးက right time, right case တွေပဲ…
ဟုတ်ပြီလေ… တကယ်ကိုပဲ ကုလားတွေ နှိပ်စက်ခံနေရတယ်လို့ ပြောနေတယ်ဆိုရင် ဓာတ်ပုံ အထောက်အထားလေးတွေ ကြည့်ချင်ပါတယ်.. တစ်ခုပဲ..ကိုယ့်အိမ်ကို ပြန်မီးရှို့တဲ့ပုံတွေတော့ မပါစေနဲ့နော်…
အမှား၊အမှန်ပေါ်တာ နောက်မှ၊ခုတော့ သေလိုက်ကြတာ အသက်တွေဗျ။
Shwe Kyi ပြောတာကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ် မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို စော်ကားတယ် ရဲခေါင်ဆို တဲ့ မျိုးမစစ်ကောင် မင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းပီး ခွေးပါးလာဝနေတယ် မိန်းကလေးတစ်ရောက်ကိုတောင်ပြန်ရန်တွေ့နေတယ် မင်းကဘာကောင်လဲတော့မသိဖူး လောလောဆယ်တော့ မင်းပြောပုံကြည့်ရတာ ကုလားခြောက်နဲ့တူတယ်၊
နောက်တစ်ကောင်ရှိသေးတယ် Blood Tear ဆိုတဲ့ကောင် မသိရင် ရခိုင်တွေကပဲ လုပ်နေသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ သတင်းတွေလျောက်တင်နေတယ် MG ကလဲ အဲလိုကောင်မျိုးတွေလူပါးဝနေတာကိုကြည့်နေရလား အလကား ခွေးသား ၀က်မြေး နွားယောက်ဖတွေ၊
ကိုရင် ရေအဲ့လူ Blood Tear ရေးတဲ့ပို့ စ်မတွေ့ လို့ ။လင့်ခ်လေး ပေးပါအုံး။
ကျွန်တော်တကယ်တမ်းဒီဂေါက်ကြောင်post အောက်မှာcomment ဝင်မပေးချင်ပါဘူး
သကြီးရဲ့ဆိုက်က နံမည်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးpost တင်လို့ရနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဗျ
သဂျီးပြောတော့ ၂၅ ပိုစ့်နဲ့ အထက်မှ ရခိုင်ပိုစ့်တင်လို့ရမယ်ဆို။ အခုသူက ၂ ပိုစ့်ပဲရှိသေးတာကို ၃ ပိုစ့် မြောက်ကရခိုင်ပိုစ့်ဖြစ်နေတယ်။ ဖတ်မိသလောက်ရှေ့ ၂ ပိုစ့်ကလဲ ရခိုင်ပိုစ့်တွေချည်းပဲ။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသူဂျီး။ နောက်သူ့ပိုစ့်တွေက ပုံမှန်သတင်းတင် ပြတာမှမဟုတ်ပဲ။ ရွာသားတွေ ပြန်မန့်တဲ့ စာကို လိုချင်တဲ့အချက်လေးပဲ ကိုးကားပြီးဝါဒဖြန့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
Thel Nu Aye ပြောတာဟုတ်တယ်။ ကျနော်လဲသတိထားမိနေတာကြာပြီ
ဒီမိုကရေစီအလံထူထားတဲ့သဂျီး အချို့နေရာတွေမှာ နဲနဲဟပေးထားသလိုပဲနော်..အဟဲ